"Unu chọrọ iji iTunes iji weghachi m iPhone", ma ọ bụ "iTunes apụghị weghachi iPhone"
Mgbe ụfọdụ, retoring iPhone ya ntọala mbụ bụ ọmarịcha ụzọ maka nchọpụta nsogbu. Ma, e nwere alway dị iche iche ihe ịkwụsị gị site na iji iTunes iweghachi gị iPhone ọma dị ka gị na kọmputa bụ bụghị mgbe aka n'oge ahụ, na-enweta ihe njehie ozi site na iTunes dị ka "iTunes apụghị weghachi iPhone n'ihi na iPhone jụrụ arịrịọ", ma ọ bụ ị dị nnọọ bụghị ọkọdọ iTunes arụnyere na achọghị iji ya. N'agbanyeghị gị bụ nke ị na n'ezie adịghị mkpa na-emechu ihu site na nke a. E nwere alway a ụzọ na-eje ije gị.
Weghachi iPhone ka Factory Ntọala enweghị iTunes
Bụrụ na ị nwere iCloud akaụntụ, ị pụrụ nanị weghachi gị iPhone si iCloud enweghị na-eji iTunes na otu kọmputa. Ọ pụrụ inyere gị kpọmkwem na-eme ya na gị na iPhone. Tupu ị na-eme ya, jide n'aka na ị kwadoo gị mkpa na iPhone.
Resetting gị iPhone: Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Iweghachi gị iPhone enweghị iTunes: Malite gị iPhone, na ị ga-kpaliri iji Mbido nnyemaaka. Ga-esi gị iPhone jikọọ Wi-Fi. Mgbe ahọrọ "Weghachi si iCloud Back".
Weghachi iPhone si ndabere enweghị iTunes
Enweghị iTunes, e nweghị ụzọ iji weghachi iTunes ndabere ka ihe iPhone, n'ihi na ọ bụ nanị ụzọ Apple-ahapụ gị na-eme na iTunes ndabere faịlụ. Mgbe ahụ, ka anyị tụlee ihe onye ọzọ, dị ka Wondershare, onye Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery)-enye gị ohere wepụ iTunes ndabere maka preview na mgbake.
Ụwa mbụ iOS ngwaọrụ data mgbake software n'ihi na ndị mmadụ na-agbake data si iPhone, iPad, iPod aka, iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere faịlụ.
Kpọmkwem ike iṅomi iPhone, iPad na iPod aka ka naghachi ehichapụ data.
Wepụ iTunes na iCloud ndabere faịlụ ka ịhụchalụ na selectively naghachi ihe ọ bụla ị chọrọ.
Naghachi faịlụ na ụdị ruo 18 iche iche dị ka kọntaktị, foto, ozi, videos, na ndị ọzọ.
Arụ ọrụ dị ukwuu n'ihi na iOS 9 na niile iPhones, iPads na iPod emetụ 5/4.
Nzọụkwụ nke iweghachi iPhone enweghị iTunes si ndabere
1. Gbaa usoro ihe omume na kọmputa gị na-ahọrọ "naputa site na iTunes ndabere File".
2. Ị pụrụ ịhụ niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị n'ebe ahụ. Họrọ otu ị chọrọ iji weghachi na pịa "Malite iṅomi" iji nweta ya amịpụtara.
3. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihuchalu niile data amịpụtara si nkwado ndabere na mpaghara. Tinye akà rà na ihe ịchọrọ na-azọpụta ya na kọmputa gị.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS nwekwara ike ka ị weghachi iPhone si iCloud ndabere. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa, ị nwere ike iji ya ozugbo download ma wepụ gị online iCloud ndabere, na-agbake ha selectively ka ị chọrọ. Ị nwere ike gụọ zuru ezu ndu ebe a: Olee otú iji weghachi iPhone si iCloud ndabere.
> Resource> iTunes> Olee otú iji weghachi iPhone enweghị iTunes